प्राचीन सभ्यताको धनी टापू बालीमा उभिएर घोत्लिँदा.....
आज मातृभूमि नेपालबाट हजारौं माइल टाढा हिन्द र प्रशान्त महासागरको सीमामा अवस्थित प्राचीन सभ्यताको धनी टापू बालीमा उभिएर घोत्लिदा प्राप्त गरेका अनुभूतिहरू सबैसंग बाँड्ने अनुमति चाहन्छु।
एउटा मध्ययुगीन गाउँको गोठालोबाट देशको सर्वोच्च कार्यकारी प्रधानमन्त्रीको जिम्मेवारी प्राप्त गरिसकेको मान्छे ६४ बर्षको उमेरमा सबैथोक त्यागेर किन भौंतारिएको होला? के ऊ बौलाएकै हो? कि ऊ अमुक शक्तिको गोटी बनेर देश र जनतालाई धोका दिन उद्यत भएको हो? वा ऊ आफ्ना समकालीन राजनीतिक नेताहरू ओली, प्रचण्ड, देउवा, उपेन्द्र, महन्त, गच्छदार, कमलहरूसंग सत्ता-शक्तिको खेलमा पराजित भए पछि नक्कली साधुको भेषमा जनतालाई ठग्न निस्केको हो? आदि आदि प्रश्नहरू व्यक्त अव्यक्त रूपमा उठ्न सक्छन्।
पहिलो, विश्वस्तरबाट हेर्दा एक्काइसौं शताब्दीको प्रारम्भिक दशकसम्म आइपुग्दा मानव जाति अभूतपूर्व विकास र भयंकर विनाशको दोसाँधमा उभिएको प्रष्ट दृष्टिगोचर हुन्छ। एकातिर आर्थिक-भौतिक विकास तथा विज्ञानप्रविधिको अकल्पनीय विकास-विस्तार र अर्कोतिर मानव मानव बीचको असमानताको खाडलको भयंकर विस्तार दुसाध्य अन्तरविरोध र संकटको रूपमा पाक्दै गैरहेको छ। त्यसैको राजनीतिक अभिव्यक्तिको रूपमा अमेरिकामा ट्रम्प, चीनमा सी जिनपिंग, रूसमा पुटीन, भारतमा मोदी, नेपालमा ओलीहरूको अवतार भैरहेको छ। सबैले आआफ्नो देशलाई 'ग्रेट' ( महान् ) बनाउने सपना बाँडिरहेछन्!
तर ठूलो माछाले सानो माछा खाने वर्तमान नवउदारवादी पुँजीवादी प्रणाली कायम रहेसम्म सबैजना एकैचोटि 'ग्रेट' बन्ने सम्भावना हुँदैहुँदैन। zero-sum-game को आधारभूत नियमले त्यसो हुन दिंदैदिंदैन। भलै केही केही अन्तर-राज्यीय र आन्तरिक-राज्यीय परोपकारी नीतिले केही समय मलहम लगाएर थामथुम पार्ने प्रयत्न गर्न सकिन्छ। अन्तत: त्यसले भयंकर द्वन्द र युद्धको स्थिति सिर्जना गर्छगर्छ।आजभन्दा सय बर्ष अगाडि बिसौं शताब्दीको शुरूमा अर्थात् प्रथम विश्वयुद्धको पूर्वसन्ध्यामा करीब करीब स्थिति यस्तै थियो।त्यसको परिणाम दुइवटा विश्वदुद्ध भएर संसारले कति क्षति व्यहोर्नुपर्यो सबैलाई सम्झना छँदैछ!
यसैकानिम्ति हामीले ५ स को अवधारणा अघि सारेका हौं। ती सबै एक अर्कासंग अन्तर्सम्बन्धित छन्।तीमध्ये 'समुन्नत समाजवाद' अन्तिम लक्ष्य वा साध्य वा गन्तव्य हो।'समतामूलक समृद्धि' त्यहाँसम्म पुग्ने मार्ग वा विधि हो। अरू तीन अर्थात् 'समावेसी/समानुपातिक/सहभागितामूलक लोकतन्त्र', ' सुशासन/सदाचार' र 'स्वाधीनता/सार्वभौमिकता' समृद्धि प्राप्त गर्ने र समुन्नत समाजवादमा पुग्ने आधार वा माध्यम हुन्!
विडम्बना के भएको छ भने जनयुद्ध, मधेसी/थारू/जनजाति आन्दोलनबाट थाकेकाहरू अब ध्रुवीकरण वा आवश्यकताको नाउँमा पुरानै यथास्थितिवादी एमाले र कांग्रेसमा विलीन हुने दौडमा छन्। चिन्तन र ज्यानमा निरन्तर क्रान्तिको झिल्को निभिसकेका र खरानीको थुप्रो मात्र बाँकिरहेकाहरू 'बहादुरीपूर्बक' पछि हट्दैछन् र एमालेमा विलयलाई ठुलो पौरखको रूपमा नगरा बजाइरहेछन् ।
हामी नयाँ चरणको समतामूलक समृद्धिको बाटो हुँदै समुन्नत समाजवाद तर्फको लामो यात्रामा लामबद्ध भएकाहरू Pilgrim's Progress मा झैं कदम कदम गर्दै अघि बढ्दैछौं! निरन्तर अघि बढिरहनेछौं।